18+ – Alpha Premium
Wet Dreams2(2005) ##unicode Sung Eun ဆိုတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသူလေးက ဖူးစားဘက်သာဆိုရင် မြင်မြင်ချင်းတန်းချစ်မယ့် အချစ်မျိုးဆိုပြီး ယုံကြည်နေတဲ့ တကယ့်ကိုမနူးမနပ်ကျောင်းသူလေးပါ သူ့ရဲ့ဖူးစာဘက်ဟာ မင်းသားလေးဖြစ်ပြီး ညတစ်ညမှာ သူနဲ့တွဲကရင်း အနမ်းတွေပေးကာချစ်မိသွားမှာလို့ ယုံကြည်ထားတဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ် တစ်နေ့မှာ SungEun က သူတို့ကျောင်းကို အချန်ပိုင်းဆရာလေးတွေရောက်လာပြီး သင်ပေးတဲ့ထဲက ဆရာတစ်ယောက်ကို သဘောကျမိသွားပြီး သူ့ရဲ့ဖူးစာဘက်ပဲလို့ မှတ်ယူလိုက်ပါတယ် SungEun မှာ တကယ်ကိုအရမ်းခင်ရတဲ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိပါတယ် အဲ့လိုသူတို့အဖွဲ့နဲ့ မတည့်တဲ့ နာမည်ကြီးကောင်မလေးတစ်ယောက်လည်းရှိပါတယ် သူတို့နှစ်ဖွဲ့က အဲ့ဒီအသစ်ရောက်လာတဲ့ဆရာ BongGu ဆိုသူကို ပြိုင်တူသဘောကျမိတဲ့အခါ ဘယ်သူအရင်လိုက်နိုင်မလဲ ပြိုင်ကြပါတယ် အဲ့လိုပြိုင်ရာမှာ နာမည်ကြီးကျောင်းသူ Baek SeMi က လည်လည်းလည်သလို အရမ်းကိုသွက်သွက်လက်လက်ရှိသူဖြစ်ပြီး SungEun ကို ဆရာနဲ့ အရင်ဆုံး အတူအိပ်နိုင်တဲ့သူက နိုင်ပြီး မအိပ်နိုင်တဲ့သူက လက်လျှော့ရမယ်ဆိုပြီး စိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ် အဲ့လိုကိစ္စတွေနားမလည်သေးတဲ့ SungEun တစ်ယောက် ဆရာ BongGu ဆိုသူကိုလည်း လက်မလွှတ်နိူင်ဘူး ဘယ်လိုရှေ့ဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းမသိဘဲ ဘေးက အပို့ကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့ ဆရာ့ရဲ့အချစ်ကို ...
IMDB: 4.5/10 4126 votes
Palitan (2021) ##unicode Palitanဇာတ်ကားမှာတော့ Jenနဲ့ ရည်းစားဖြစ်သူ Jamesတို့က လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်နေကြသူတွေဖြစ်ပြီးတော့ လက်ထပ်ပွဲနေ့သတ်မှတ်ဖို့ Jenအဖေနဲ့တွေ့ဖို့အတွက် နှစ်ယောက်သား Manilaကနေ Jen မွေးရပ်မြေကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ Jen မွေးရပ်မြေမှာလဲ Jenရဲ့ အချစ်‌ဆုံးသူငယ်ချင်းMarieဟာရည်းစားဖြစ်သူ Alနဲ့လက်ထပ်တော့မှာမို့ Jenကို သတို့သမီးအရံလုပ်ပေးဖို့ ဖိတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ချစ်သူ Jamesနဲ့အတူ Jenဟာ မွေးရပ်မြေကိုပြန်လာပြီးတော့ သူငယ်ချင်းMarieတို့စုံတွဲနဲ့အတူ လက်ထပ်ပွဲအတွက်လိုက်ကူညီပေးရင်းနဲ့ Jenနဲ့ Marieဟာ သူတို့တွေ မေ့ထားခဲ့ရတဲ့ တစ်ချိန်တစ်ခါက ခံစားချက်တွေက ပြန်လည်ပေါက်ဖွားလာခဲ့တယ်။ Jenအဖေရဲ့ တားမြစ်မှုကြောင့် ရပ်တန့်လိုက်ရတဲ့ Jenနဲ့ Marieတို့ရဲ့ အချစ်တွေက ပြန်ပေါ်ပေါက်လာပါ့မလား။ သူတို့ရဲ့ လက်ထပ်ပွဲတွေကရော အဆင်ပြေပြေကျင်းပနိုင်ကြမလားဆိုတာကို ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ (18+ဇာတ်ကားမို့ မိသားစုနဲ့အတူကြည့်ဖို့မသင့်တော်ပါဘူး) ##zawgyi Palitanဇာတ္ကားမွာေတာ့ Jenနဲ႔ ရည္းစားျဖစ္သူ Jamesတို႔က လက္ထပ္ဖို႔စီစဥ္ေနၾကသူေတြျဖစ္ၿပီးေတာ့ လက္ထပ္ပြဲေန႔သတ္မွတ္ဖို႔ Jenအေဖနဲ႔ေတြ႕ဖို႔အတြက္ ႏွစ္ေယာက္သား Manilaကေန Jen ေမြးရပ္ေျမကိုျပန္လာခဲ့တယ္။ Jen ေမြးရပ္ေျမမွာလဲ Jenရဲ႕ အခ်စ္‌ဆုံးသူငယ္ခ်င္းMarieဟာရည္းစားျဖစ္သူ Alနဲ႔လက္ထပ္ေတာ့မွာမို႔ Jenကို သတို႔သမီးအရံလုပ္ေပးဖို႔ ဖိတ္ထားတာျဖစ္တယ္။ခ်စ္သူ Jamesနဲ႔အတူ Jenဟာ ေမြးရပ္ေျမကိုျပန္လာၿပီးေတာ့ သူငယ္ခ်င္းMarieတို႔စုံတြဲနဲ႔အတူ လက္ထပ္ပြဲအတြက္လိုက္ကူညီေပးရင္းနဲ႔ Jenနဲ႔ Marieဟာ သူတို႔ေတြ ေမ့ထားခဲ့ရတဲ့ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက ခံစားခ်က္ေတြက ...
More the Merrier (2021) (App only) (free ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေလဲ app ကနေဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်) ##unicode (18+ဇာတ်ကားမို့ မိသားစုနဲ့အတူကြည့်ဖို့မသင့်တော်ပါဘူး) More the merrierဆိုတဲ့ဇာတ်ကားနာမည်အတိုင်း ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ သာမန်ရိုးကျ sex lifeကိုမလိုချင်ဘဲ အသစ်အဆန်းကိုtryကြည့်ချင်နေတဲ့လူတွေရဲ့ အကြောင်းကိုရိုက်ကူးပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် - ဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ရတဲ့နိုက်ကလပ်ကိုရောက်လာကြတဲ့လူတွေ - အရေးထဲလက်ထပ်လက်စွပ်ပျောက်နေတဲ့သတို့သမီးလောင်း - ကလပ်မှာလက်စွပ်လာရှာတဲ့အလွဲတွေ မတူညီတဲ့ sexကိုစမ်းကြည့်ချင်ကြတဲ့သူတို့ ထင်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့အခါ ဘယ်လိုအလွဲတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာ ဟာသတွေနဲ့မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်လို့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကြည့်ရူရမယ့် ဇာတ်ကားတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ် ။##zawgyi (18+ဇာတ္ကားမို႔ မိသားစုနဲ႔အတူၾကည့္ဖို႔မသင့္ေတာ္ပါဘူး) More the merrierဆိုတဲ့ဇာတ္ကားနာမည္အတိုင္း ဒီဇာတ္ကားမွာေတာ့ သာမန္႐ိုးက် sex lifeကိုမလိုခ်င္ဘဲ အသစ္အဆန္းကိုtryၾကည့္ခ်င္ေနတဲ့လူေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကို႐ိုက္ကူးျပထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္ - ဒါမ်ိဳးေတြလုပ္လို႔ရတဲ့ႏိုက္ကလပ္ကိုေရာက္လာၾကတဲ့လူေတြ - အေရးထဲလက္ထပ္လက္စြပ္ေပ်ာက္ေနတဲ့သတို႔သမီးေလာင္း - ကလပ္မွာလက္စြပ္လာရွာတဲ့အလြဲေတြ မတူညီတဲ့ sexကိုစမ္းၾကည့္ခ်င္ၾကတဲ့သူတို႔ ထင္ထားတဲ့အတိုင္းျဖစ္မလာတဲ့အခါ ဘယ္လိုအလြဲေတြျဖစ္မလဲဆိုတာ ဒီဇာတ္ကားမွာ ဟာသေတြနဲ႔ျမင္ေတြ႕ရမွာပဲျဖစ္လို႔ေပါ့ေပါ့ပါးပါးၾကည့္႐ူရမယ့္ ဇာတ္ကားတစ္ကားပဲျဖစ္ပါတယ္ Review – Hmue File Size – 1.3GB,2.6GB Format…mp4 Quality : 1080p WEB-DL,720p WEB-DL Genre : Horror, Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & Hmue Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါင်းရန္ App Link မန်ဘာဝင်လိုသူများ viber ...
IMDB: 5.4/10 1,047 votes
Part-Time Girlfriend (2021) (App member only) ##unicode (၁၈+ အခန်းတွေပါတာမလို့ မိသားစုနဲ့ကြည့်ဖို့မသင့်တော်ပါဘူးနော်) အချိန်ပိုင်းရည်းစားအဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာဒီနေ့ခေတ်မှာရေပန်းစားလာတာကိုအားလုံးလည်းအသိဖြစ်မှာပါ ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာတော့ဝန်ကာကျုံဟာရည်းစားမရှိ Single အဖြစ်နေလာတာ ၇ နှစ်တောင်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ် တစ်ရက်မှာတော့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူတစ်ယောက်အငှားရည်းစားခေါ်တာကိုတွေ့ပြီး ကာကျုံလည်းစမ်းသပ်ပြီးတွဲဖို့စိတ်ကူးလိုက်ပါတယ် ဒါပေမယ့်အချိန်ပိုင်းရည်းစားတွေဟာကြေးကြီးပြီး တစ်ခါတစ်လေဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေဟာပြင်ဆင်ပြီးလက်တွေ့နဲ့ကွာခြားနေတာတွေလည်းရှိပါတယ် အဲ့တာကြောင့်ယောက်ျားလေးအများစုဟာလည်း ပိုက်ဆံကုန်ပြီးကိုယ့်အကြိုက်မတွေ့ပြဿနာတွေလည်းတွေ့ရပါတော့တယ် အဲ့ဒီထဲမှာကာကျုံလည်တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ် ကာကျုံတစ်ယောက်သူ့လိုပြဿနာတွေမကြုံတွေ့ရအောင် တခြားသူတွေကိုကူညီဖို့အတွက် PTGF အကြောင်းလေ့လာပြီး လိုက်နာရမယ့်အချက်တွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ ဝေမျှပေးပါတော့တယ် ကာကျုံတစ်ယောက်သူများပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းသွားမလဲ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေတွေ့ကြုံရဦးမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi (၁၈+ အခန္းေတြပါတာမလို႔ မိသားစုနဲ႔ၾကည့္ဖို႔မသင့္ေတာ္ပါဘူးေနာ္) အခ်ိန္ပိုင္းရည္းစားအျဖစ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့လုပ္ငန္းေတြဟာဒီေန႔ေခတ္မွာေရပန္းစားလာတာကိုအားလုံးလည္းအသိျဖစ္မွာပါ ဒီဇာတ္ကားေလးထဲမွာေတာ့ဝန္ကာက်ဳံဟာရည္းစားမရွိ Single အျဖစ္ေနလာတာ ၇ ႏွစ္ေတာင္ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္ တစ္ရက္မွာေတာ့သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူတစ္ေယာက္အငွားရည္းစားေခၚတာကိုေတြ႕ၿပီး ကာက်ဳံလည္းစမ္းသပ္ၿပီးတြဲဖို႔စိတ္ကူးလိုက္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္အခ်ိန္ပိုင္းရည္းစားေတြဟာေၾကးႀကီးၿပီး တစ္ခါတစ္ေလဆိုရွယ္မီဒီယာေတြေပၚမွာတင္ထားတဲ့ ဓာတ္ပုံေတြဟာျပင္ဆင္ၿပီးလက္ေတြ႕နဲ႔ကြာျခားေနတာေတြလည္းရွိပါတယ္ အဲ့တာေၾကာင့္ေယာက္်ားေလးအမ်ားစုဟာလည္း ပိုက္ဆံကုန္ၿပီးကိုယ့္အႀကိဳက္မေတြ႕ျပႆနာေတြလည္းေတြ႕ရပါေတာ့တယ္ အဲ့ဒီထဲမွာကာက်ဳံလည္တစ္ေယာက္အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္ ကာက်ဳံတစ္ေယာက္သူ႔လိုျပႆနာေတြမႀကဳံေတြ႕ရေအာင္ တျခားသူေတြကိုကူညီဖို႔အတြက္ PTGF အေၾကာင္းေလ့လာၿပီး လိုက္နာရမယ့္အခ်က္ေတြကိုဆိုရွယ္မီဒီယာေတြမွာ ေဝမွ်ေပးပါေတာ့တယ္ ကာက်ဳံတစ္ေယာက္သူမ်ားျပႆနာေတြကိုဘယ္လိုေျဖရွင္းသြားမလဲ ဘယ္လိုအခက္အခဲေတြေတြ႕ႀကဳံရဦးမလဲဆိုတာကိုဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Phyu Sin File Size – 1.3GB,2.4GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Genre : Horror Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & Hmue Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါင်းရန္ App Link မန်ဘာဝင်လိုသူများ viber – 09691177142
IMDB: 6.8/10 4785 votes
Girls Girls Girls (2014) ##unicode Girls Girls Girls(2014)ဒီကားလေးကတော့ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်အကြောင်းကိုရိုက်ထားတဲ့ Comedy,Mature ဇာတ်ကားလေးပါ rating6အထိရရှိထားပါတယ်Castတွေကတော့ Lee Young Hoon,Gu Ji Sung,Shin Joo Ah,Yoon Chae Yi တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ယွန်းဂျယ်,ဟာအွန်း,ချွန်းဟီးတို့သုံးယောက်က အသက်၁၅နှစ်ကတည်းကသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီး ယွန်းဂျယ်ကတော့ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ရဲ့အငယ်ဆုံးသမီးဖြစ်ပြီး အခန်း၁၂၀၃မှာယောကျာ်းလေးနဲ့ တစ်ဘဝလုံးဖြတ်သန်းချင်သူပါ ဟာအွန်းက wedding planner ဖြစ်ပြီး၁၀နှစ်လောက်တွဲခဲ့တဲ့သူနဲ့ ပြတ်ပြီးအလုပ်ပြုတ်နေတဲ့သူပါ ချွန်းဟီးက အထက်တန်းဆရာမဖြစ်ပြီး တစ်ခါမှ sex မလုပ်ဖူးသူပေါ့ တစ်နေ့သူတို့သုံးယောက်က ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်နဲ့အိပ်ဖို့ အလောင်းအစားလုပ်ကြပါတော့တယ် အရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး မင်းသမီးတွေကလဲ အလန်းလေးတွေမို့ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ဖို့ညွှန်းလိုက်ရပါတယ်။ ##zawgyi Girls Girls Girls(2014)ဒီကားေလးကေတာ့ သူငယ္ခ်င္းသံုးေယာက္အေၾကာင္းကို႐ိုက္ထားတဲ့ Comedy,Mature ဇာတ္ကားေလးပါ rating6အထိရ႐ွိထားပါတယ္Castေတြကေတာ့ Lee Young Hoon,Gu Ji Sung,Shin Joo Ah,Yoon Chae Yi တို႔ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ယြန္းဂ်ယ္,ဟာအြန္း,ခြၽန္းဟီးတို႔သံုးေယာက္က အသက္၁၅ႏွစ္ကတည္းကသူငယ္ခ်င္းေတြျဖစ္ျပီး ယြန္းဂ်ယ္ကေတာ့ ဟိုတယ္ပိုင္႐ွင္ရဲ႕အငယ္ဆံုးသမီးျဖစ္ၿပီး အခန္း၁၂၀၃မွာေယာက်ာ္းေလးနဲ႔ တစ္ဘဝလံုးျဖတ္သန္းခ်င္သူပါ ဟာအြန္းက wedding planner ျဖစ္ၿပီး၁၀ႏွစ္ေလာက္တြဲခဲ့တဲ့သူနဲ႔ ျပတ္ၿပီးအလုပ္ျပဳတ္ေနတဲ့သူပါ ခြၽန္းဟီးက ...
The Dirty Picture (2011) ##unicode The Dirty Pictureဇာတ်ကားမှာတော့ Reshmaဆိုတဲ့ကောင်မလေးက နာမည်ကျော်မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ရွာကထွက်လာကာ မြို့ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်။ လူရွေးပွဲတွေ သွားခဲ့ပေမဲ့ သူ့ကိုအရည်အချင်းမရှိဘူးလို့ပြောကြတာကြောင့် လက်လျှော့လိုက်မဲ့အချိန်မှာဘဲ သူ့ဆီအခွင့်အရေးတစ်ခုက ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်တစ်ကားမှာ သီချင်းတစ်ပိုင်းလောက်ဘဲ ဝင်ကခဲ့တဲ့ Reshmaက သူ့နာမည်ကြီးလာမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ တစ်ဖက်မှာလဲ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Abrahamကတော့ Reshmaရဲ့ Sexy ကျတဲ့အကကြောင့် သူ့ရုပ်ရှင်ပျက်ဆီးမှာမို့ ဖြတ်ပစ်လိုက်ခဲ့တယ်။Abrahamက အရည်အချင်းရှိပြီးတော့ ဆုတွေရထားတဲ့ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ သူ့ရုပ်ရှင်တွေကတော့ လူကြိုက်မများတာကြောင့် ထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်နေတဲ့အချိန်မှာ Abrahamဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ Reshmaရဲ့အက ကိုမြင်ပြီးရုပ်ရှင်ထဲ ပြန်ထည့်လိုက်ကြတယ်။ Reshmaရဲ့အကကြောင့်ရုပ်ရှင်က ဝက်ဝက်ကွဲအောင်မြင်သွားပြီး Reshmaလဲနာမည်ကြီးလာခဲ့တယ်။ Reshmaနာမည်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ သူ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာ Reshmaလို အပေါစားကကွက်တွေနဲ့ အကသမားကိုထည့်မရိုက်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ Abrahamတစ်ယောက်ကတော့ နာမည်ကျလာခဲ့တယ်။အရည်အချင်းကြောင့်နာမည်ကြီးလာတာ မဟုတ်ဘဲ Sexyကျတဲ့ က ကွက်တွေကြောင့် နာမည်ကြီးလာတဲ့ Reshmaတစ်ယောက် သူရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်မလား။ Reshmaကိုအမုန်းကြီးမုန်းနေတဲ့ Abrhamတစ်ယောက်ကရေ Reshmaကို ဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi The Dirty Pictureဇာတ္ကားမွာေတာ့ Reshmaဆိုတဲ့ေကာင္မေလးက နာမည္ေက်ာ္မင္းသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ ႐ြာကထြက္လာကာ ၿမိဳ႕ကိုတက္လာခဲ့ပါတယ္။ လူေ႐ြးပြဲေတြ သြားခဲ့ေပမဲ့ သူ႔ကိုအရည္အခ်င္းမရွိဘူးလို႔ေျပာၾကတာေၾကာင့္ လက္ေလွ်ာ့လိုက္မဲ့အခ်ိန္မွာဘဲ သူ႔ဆီအခြင့္အေရးတစ္ခုက ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ ႐ုပ္ရွင္တစ္ကားမွာ သီခ်င္းတစ္ပိုင္းေလာက္ဘဲ ဝင္ကခဲ့တဲ့ Reshmaက သူ႔နာမည္ႀကီးလာမယ္လို႔ထင္ခဲ့တယ္။ တစ္ဖက္မွာလဲ ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာ ...
IMDB: 6.6/10 8,572 votes
My Awkward Sexual Adventure (2020) ##unicode အိပ်ယာထဲမှာ မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးဆိုပြီး ရည်းစားက ထားသွားတဲ့ စာရင်းကိုင်လေး ဂျော်တန်....... တိုရွန်တိုမြို့ကို ရည်းစားနဲ့လည်ပတ်ဖို့ စီစဉ်ထားပေမယ့် ကောင်မလေးက မလာတဲ့အတွက် တစ်ယောက်တည်း ငိုင်တိုင်တိုင် တိုရွန်တိုမြို့ကိုရောက်လာပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီမြို့ကိုရောက်တော့ သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းက သူ့ကို မိန်းမကိုင်တွယ်နည်းတွေ သင်ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဖော်ချွတ်သမားအဖြစ် အသက်မွေးနေရသော်လည်း ဘဝကို ပျော်ပျာ်နေတတ်ပြီး အနာဂတ်မှာ စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ချင်တဲ့ ကောင်မလေး ဂျူလီယာ...... ဂျော်တန်တစ်ယောက် စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ လျှောက်သွားနေရင်း အဖော်ချွတ်ကလပ်ထဲ ရောက်သွားပါတော့တယ်။ သူ့ကိုထားသွားတဲ့ ရည်းစား သူ့ဆီပြန်လာအောင်၊သဝန်တိုအောင် လုပ်မယ်ဆိုပြီး ကလပ်က ကောင်မလေးတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်နေရင်း လူကလည်းမူးဆိုတော့ သူ့ဆီမှာရှိသမျှပိုက်ဆံ၊ဘောင်းဘီကအစအကုန် ယူသွားခံခဲ့ရပါတယ်။ ကလပ်ရဲ့နောက်ဖေးဘက်ကို အိမ်ပြန်ရန်ထွက်လာသော ဂျူလီယာတစ်ယောက် ဂျော်တန်ကို သနားတဲ့အတွက် အိမ်ခေါ်ခဲ့ရာမှ ရင်းနှီးသွားကာ တစ်ယောက်ရဲ့ အခက်အခဲကို တစ်ယောက် ပြန်ကူညီရင်း စိတ်ထဲကနေ သံယောဇဉ်လေးတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဆိုနောက်ပိုင်းမှာ ဂျော်တန်ရဲ့အရင်ရည်းစားကရော သူ့ဆီပြန်လာအုန်းမလား။ ဂျူလီယာနဲ့ ဂျော်တန်တို့ပဲ ပေါင်းဖက်သွားကြမလားဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ Comedy ...
IMDB: 6.1/10 9,089 votes
My Awkward Sexual Adventure (2020)
My Horny Neighbour Girl သူမလို AV မင်းသမီးတစ်ယောက် ကြည့်ရဖို့က နဲတဲ့ကုသိုလ်ကံ မဟုတ်ဘူး ၃၁ ဘုံမှာ အမိုက်ဆုံး AV Model တစ်ယောက်လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ် အထူးသဖြင့် သူမပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဖွင့်ထွားတဲ့ စနေနှခိုင် ဖူးအာနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းတစုံ စတာတွေက အသက်တွေပါပဲ မျက်နှာလေးက နန်းဆန်ပြီး Amature အမူရာနဲ့ တစ်လှည့် Mature အမူယာနဲ့တစ်ဖုံ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ထားတယ်…. တက်သစ်စ AV မလေးတစ်ယောက် အခန်းပြောင်းလာပါတယ် ဟိုဖက်က ငနဲတကောင်ကလည်း FA တစ်ယောက် ပီပီ ထွက်သမျှ AV တွေကို မလွတ်တမ်းအားပေးနေတာ မျက်ရည်က အတော်ဝနေပါပြီ တနေ့မှာ မော်ဒယ်လေးက မိတ်ဖွဲ့ဖို့ တဖက်က ကောင်လေးအခန်း ကိုသွားလည်ပါတယ် အဲဒီမှာ ကောင်လေးကြည့်နေတဲ့ DVD အခွေကိုတွေ့သွားပြီး …… တက်သစ်စ မော်ဒယ်မလေးက ကုန်ကြမ်းတွေကို အပီအပြင်လေ့လာခွင့်ရသွားသလို ငနဲရဲ့ ကုန်ကြမ်းတွေကလည်း ပေးမကုန်နိုင်ပါဘူး…. အနေအထားတွေကို အခေါ်အဝေါ်တွေ နဲ့တွဲပြီး ပူးပေါင်း လေ့လာကြတာကို ပုံဖေါ်ထားလို့ ၂၁+ ဆိုပြီး ပုရိသတို့လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်ပါပြီ…
Innocent Thing Innocent Thing (2014) ================= IMDb Rating – 6.1/10 #Unicode ပုံမှန်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်တစ်ကားကိုညွှန်းရင် မင်းသားဘယ်သူ မင်းသမီးဘယ်သူဆိုတာက စညွှန်းရမယ်ထင်တယ်။ Innocent Thingရဲ့ Lead Actorက Jang Hyukပါ။ Jang Hyuk ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေဟာ အရမ်းလန်ပြန်နေတာမျိူး တွေချည်း မဟုတ်ပေမယ့်လည်းမဆိုးတဲ့ ကားတွေပါပဲ။ You are my destinyတို့ Money Flowerတို့Work of Loveတို့လို ပေါက်စီးရီးတွေနဲ့ လူသိများတယ်။ Lead Actress Jo Bo-Ahကတော့ လက်ရှိHotနေတဲ့ vampire diaries Korean versionထဲကပါပဲ။ ဒီကားပြန်ဖြစ်တာသူ့ကြောင့်ဆိုရမယ်။ သူ့ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကားထက်ပိုကောင်းတာဘာမှမရှိ‌တော့ပါဘူး။ ဒီရုပ်ရှင်မှာ သူ့ဇာတ်ကောင်ဟာ ဆရာကိုကြိုက်နေတဲ့ ကျောင်းသူမလေး‌နေရာကပါ။ ဆရာလုပ်တဲ့ Jang Hyukကိုရဖို့ မရမက ဖျားရောင်းတာတွေကို တလှေကြီးမြင်ရမှာပါပဲ။၁၆နှစ်အောက်တော့ မကြည့်သင့်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ရက်ဂီဘောသမားထွက်ဖြစ်တဲ့ ကင်ဂျန်ကီဟာ ယောက္ခမအကူအညီနဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ကာယဆရာအဖြစ်အလုပ်၀င်လုပ်နေတယ်။ ကျောင်းဆရာဖြစ်ဖို့မသင့်တော်လောက်အောင် ချောလွန်းတဲ့သူ့ရုပ်ကြောင့်တပြည့်မတွေအကုန်လုံးဟာ သူ့ကိုအရူးအမူးဖြစ်နေကြတယ်။ သူ့တပြည့်မတွေထဲက တစ်ယောက်ကတော့ မတူပါဘူး။ သူက ယောင်းအွန်။ ယောင်းအွန်က လိုချင်တာကို ရအောင်ယူတတ်တဲ့ သဘာ၀ရှိတဲ့ ကလေးမပါပဲ။ ဇနီးလည်းရှိ ကလေးလည်းမွေးတော့မယ့် ဆရာကို ရဖို့ ဆင်ကြံကြံဂေါ်ဇီလာကြံအထိကြံကုန်ပါတယ်။ ကင်ဂျန်ကီကလည်း ဒီညွတ်ကွင်းကနေ မရုန်းနိုင်ပါဘူး။ တပြည့်မလေးရယ် သူ့မိန်းမရယ် မွေးတော့မယ့် ကလေးရယ်ကြားမှာ သူအကြပ်ရိုက်လာပါပြီ။ သူရဲ့မပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲမှာ ဘာတွေဖြစ်မလဲတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲကြည့်ရှု့လိုက်ကြပါ။
IMDB: 6.1/10 655 votes
Van Wilder: Freshman Year (2009) ##unicode Van Wilder: Freshman yearကားမှာတော့ Van Wilderတစ်ယောက်အထက်တန်းကျောင်းက ဘွဲ့ရသွားပြီးတော့ သူ့အဖေတတ်ခဲ့တဲ့ Collindge ကောလိပ်ကိုသွားတက်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ပါတီတွေတက်ရတာ အရက်တွေသောက်ရတာ ကောင်မလေးတွေနဲ့ရှုပ်ရတာ အရမ်းကြိုက်တဲ့ Van Wilderတစ်ယောက် ကောလိပ်ရောက်ရင်အပြီကဲဖို့တွေးထားပေးမဲ့ သူရောက်သွားတဲ့ Collindge Colledgeကိုဦးဆောင်သူ ကာနယ်Charles Reardonက သူ့အဖေနဲ့ကျောင်းအတူတက်ခဲ့ပြီးတော့ ကျောင်းကိုစစ်စခန်းတစ်ခုလို လေ့ကျင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ် ။ ပါတီတွေလုပ်တာ အရက်သောက်တာတွေကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ထားတာဖြစ်တယ်။ ကောလိပ်ရောက်ရင် ကဲဖို့တွေးထားတဲ့ Van Wilderတစ်ယောက်ကတော့ ဒီစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်ပြီး သူလုပ်ချင်တာလုပ်ရင်းနဲ့ ကာနယ်Charles Reardonနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါတော့တယ်။ Van Wilderတစ်ယောက်Charles Reardonကိုအနိုင်ယူပြီးတော့သူစိတ်ကြိုက်ပါတီတွေလုပ်နိုင်မလား။ သူသဘောကျနေတဲ့ ကောင်မလေး Kaitlin Hayesဆီကရောအထင်ကြီးမှုခံရမလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစွာကြည့်ရှုရမဲ့ကားလေးပါ။ ##zawgyi Van Wilder: Freshman yearကားမွာေတာ့ Van Wilderတစ္ေယာက္အထက္တန္းေက်ာင္းက ဘြဲ႕ရသြားၿပီးေတာ့ သူ႔အေဖတတ္ခဲ့တဲ့ Collindge ေကာလိပ္ကိုသြားတက္ဖို႔ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ပါတီေတြတက္ရတာ အရက္ေတြေသာက္ရတာ ေကာင္မေလးေတြနဲ႔ရႈပ္ရတာ အရမ္းႀကိဳက္တဲ့ Van Wilderတစ္ေယာက္ ေကာလိပ္ေရာက္ရင္အၿပီကဲဖို႔ေတြးထားေပးမဲ့ သူေရာက္သြားတဲ့ Collindge Colledgeကိုဦးေဆာင္သူ ကာနယ္Charles Reardonက သူ႔အေဖနဲ႔ေက်ာင္းအတူတက္ခဲ့ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းကိုစစ္စခန္းတစ္ခုလို ေလ့က်င့္ေပးထားတာျဖစ္တယ္ ။ ပါတီေတြလုပ္တာ အရက္ေသာက္တာေတြကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္တားျမစ္ထားတာျဖစ္တယ္။ ေကာလိပ္ေရာက္ရင္ ကဲဖို႔ေတြးထားတဲ့ Van Wilderတစ္ေယာက္ကေတာ့ ဒီစည္းကမ္းေတြကိုခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး သူလုပ္ခ်င္တာလုပ္ရင္းနဲ႔ ...
IMDB: 5.3/10 13,718 votes
Sex and the City ဇာတ်လမ်းအညွှန်း ***************** နယူးယောက်မြို့ကြီးကို လူတွေလာကြတာ ၂ ချက်ပဲရှိတယ် အောင်မြင်မှုနဲ့ အချစ် အတွက်ပဲ….လို့ ခံယူထားတဲ့ Carrie Bradshaw , Samantha Jones , Charlotte York , Miranda Hobbes တို့ ၄ ယောက်ဟာ အရမ်းခင် ကြတဲ့ squad ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ခံယူချက်အတိုင်း သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်မှာအောင်မြင်မှုကိုရရှိပြီးတဲ့အခါမှာ အချစ်စစ်ကို စူးစမ်းရှာဖွေကြရင်းနဲ့ ဘဝရဲ့အလွဲလွဲအချော်ချော်အဖြစ်အပျက်တွေကို ဘယ်လိုထိန်းကျောင်းကျော် ဖြတ်သွားမလဲ ခံစားရမှာပါ ။ သူငယ်ချင်း ၄ ယောက်ရဲ့ Friendship နဲ့ Relationship ကိုတဝကြီးကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပြီး Romance, Drama ကားကောင်းကောင်းရှာနေတဲ့လူတွေအတွက်တော့ ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ခုပါပဲ။ Ps − Nude scence အချို့ပါတဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မသင့်တော်ပါဘူး။ (ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်ရေးသားပေးသူကတော့ Thiha Yan Naing ဖြစ်ပါတယ်။) #Zawgyi ေခါင္းစဥ္ကိုၾကည့္ၿပီး 21+ ကားထင္ေနရင္မွားသြားပါလိမ့္မယ္။ ထက္ျမက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြၾကည့္သင့္တဲ့ ဇာတ္ကားေကာင္းေလး လာပါၿပီ။ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕သူ ...
IMDB: 5.6/10 114,902 votes
IMDB: 6.1/10 2,587 votes
On A Day When Our Parents Weren’t Home (2020) 21+
Deep Murder (18+warrning)မိသားစုဝင်များ ကလေးသူငယ်များနဲ့ကြည့်ရှူရန်မသင့်တော်သော စကားလုံးအသုံးအနှုန်းများ ဝတ်လစ်စလစ်အခန်းများ သွေးထွက်သံယို ဇာတ်ဝင်ခန်းများပါဝင်ပါတယ် (၂၀၁၉)ထုတ် Horror Comedyဇာတ်ကားလေးပါ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဟုချ်ဒန်ဂလာဆိုတဲ့ကြောင်တောင်တောင်ကောင်လေး မကြာမီကောလိပ်တက်ရတော့မည်ဖြစ်သော်လည်း လူပျိုရည်မပျက်သေးသောကြောင့် ကောလိပ်မှာ ဝိုင်းလှောင်မှာစိုးရိမ်နေရကြောင်းသူ့သူငယ်ချင်း ဂျေ့နဲ့တိုင်ပင်ပါတယ် ဂျေ့ကလည်း သူတို့အိမ်က ကလေးထိန်းမလေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သင်ကြားပြပါတယ် တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ သူ့အမေကလဲ သူ့အဖေရဲ့ညီဖြစ်သူ ဒေါ့နဲ့အပေါ်ထပ်မှာဖောက်ပြန်နေပါတယ် ထိုအချိန်မှာ အိမ်ရှေ့ကတံခါးခေါက်သံကြောင့် ဟုချ်တစ်ယောက် သွားကြည့်ရာကနေ ဘန်နီဗန်ကလစ်ဆိုတဲ့ သိပ္ပပညာရှင်တစ်ယောက်နဲ့ဆုံပါတယ် ဘန်နီက မုန်တိုင်းအကြောင်းသတင်းလာပေးရာမှဟုချ်ကဖိတ်ခေါ်လို့အိမ်ထဲရောက်လာခဲ့ပါတယ် အဲ့လိုဖြစ်ပျက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ သူ့ဦးလေးဒေါ့ကအသတ်ခံရပါတော့တယ် သူ့ဦးလေးဒေါ့ကို ဘယ်သူသတ်လဲအဖြေရှာကြရင်း လူသတ်သမားနဲ့သူတို့ ဘယ်လိုတွေရင်ဆိုင်ကြရမလဲကတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာကြည့်ရှုပေးပါဦး
American Pie Presents: Girls’ Rules (2020) ##unicode American pie present girls ruleဇာတ်ကားမှာတော့အထန်ကျောင်းကသူငယ်ချင်းကောင်မလေး၄ယောက်ရဲ့Sex lifeကိုရိုက်ပြထားတဲ့ကားဖြစ်တယ်။ Annieကသူမရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ကိုသူမအချစ်ဆုံးသူနဲ့ဘဲဖြတ်သန်းချင်သူတစ်ဦးဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့သူမရည်းစားJasonကတော့တစ်ခြားမြို့မှာကောလိပ်သွားတတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Kaylaကတော့လက်တလောမှာသူမရဲ့သဝန်တိုမှုကြောင့်ရည်းစားနဲ့ပြသာနာဖြစ်နေသူဖြစ်တယ်။ Stephanieကတော့ကျောင်းကအမိုက်စားကောင်မလေးဖြစ်ပြီးတော့ရည်းစာမထားဘဲနဲ့အတူနေဆက်ဆံရေးများသာရှိသူဖြစ်တယ်။ Michelleကတော့ကျောင်းသားကောင်စီရဲ့ဒက္ကဌဖြစ်ပြီးတော့ယောကျာ်းတွေထက်အာသာဖြေအရုပ်တွေက်ုဘဲစွဲမက်သူဖြစ်တယ်။ သူမတို့၄ယောက်ကသူမတို့အချစ်ရေးကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်သူမတို့အကြိုက်ကောင်လေးကို ကျောင်းကပွဲအမှီရှာဖို့အတွက်သဘောတူလိုက်ကြတယ်။ ကျောင်းစဖွင့်နေ့မှာတော့ကျောင်းပြောင်းလာတဲ့ကျောင်းသားသစ်Grantကသူမတို့လေးယောက်လုံးရဲ့အကြိုက်နဲ့ကိုက်ညီနေတဲ့အခါ ကောင်မလေး၄ယောက်Grantကိုဘယ်လိုဆွဲဆောင်မလဲ။ Grantကရောဘယ်သူ့ကိုသဘောကျသွားမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဟာသရောနှောပြီး အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပွင့်လင်းစွာ တင်ဆက်ထားလို့ မိသားစုနဲ့တော့ မကြည့်သင့်ပါဘူး။ ##zawgyi American pie present girls ruleဇာတ္ကားမွာေတာ့အထန္ေက်ာင္းကသူငယ္ခ်င္းေကာင္မေလး၄ေယာက္ရဲ႕Sex lifeကို႐ိုက္ျပထားတဲ့ကားျဖစ္တယ္။ Annieကသူမရဲ႕ပထမဆုံးအႀကိမ္ကိုသူမအခ်စ္ဆုံးသူနဲ႔ဘဲျဖတ္သန္းခ်င္သူတစ္ဦးျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့သူမရည္းစားJasonကေတာ့တစ္ျခားၿမိဳ႕မွာေကာလိပ္သြားတတ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ Kaylaကေတာ့လက္တေလာမွာသူမရဲ႕သဝန္တိုမႈေၾကာင့္ရည္းစားနဲ႔ျပသာနာျဖစ္ေနသူျဖစ္တယ္။ Stephanieကေတာ့ေက်ာင္းကအမိုက္စားေကာင္မေလးျဖစ္ၿပီးေတာ့ရည္းစာမထားဘဲနဲ႔အတူေနဆက္ဆံေရးမ်ားသာရွိသူျဖစ္တယ္။ Michelleကေတာ့ေက်ာင္းသားေကာင္စီရဲ႕ဒကၠဌျဖစ္ၿပီးေတာ့ေယာက်ာ္းေတြထက္အာသာေျဖအ႐ုပ္ေတြက္ုဘဲစြဲမက္သူျဖစ္တယ္။ သူမတို႔၄ေယာက္ကသူမတို႔အခ်စ္ေရးကိုေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္သူမတို႔အႀကိဳက္ေကာင္ေလးကို ေက်ာင္းကပြဲအမွီရွာဖို႔အတြက္သေဘာတူလိုက္ၾကတယ္။ ေက်ာင္းစဖြင့္ေန႔မွာေတာ့ေက်ာင္းေျပာင္းလာတဲ့ေက်ာင္းသားသစ္Grantကသူမတို႔ေလးေယာက္လုံးရဲ႕အႀကိဳက္နဲ႔ကိုက္ညီေနတဲ့အခါ ေကာင္မေလး၄ေယာက္Grantကိုဘယ္လိုဆြဲေဆာင္မလဲ။ Grantကေရာဘယ္သူ႔ကိုသေဘာက်သြားမလဲဆိုတာစိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမဲ့ကားေလးျဖစ္ပါတယ္။ ဟာသေရာေႏွာၿပီး အေနာက္တိုင္း ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ပြင့္လင္းစြာ တင္ဆက္ထားလို႕ မိသားစုနဲ႔ေတာ့ မၾကည့္သင့္ပါဘူး။ Review – Myet Chel File Size – 1GB Format…mp4 Quality : 720p WEB-DL Genre :Comedy Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Myet Chel Encoded by Arrow
American Pie Collection ကဲ…..ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟာသဆန်ဆန် ဇာတ်ကားကြိုက်နှစ်သူပရိတ်သတ်တွေအတွက် လက်မလွတ်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားများလာပါတော့မယ်။ American Pie ဆိုတဲ့ နာမည်ကျော် ကျောင်းသားဟာသဇာတ်ကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း (၈) ကားရှိပါတယ်။ တစ်ကားနဲ့တစ်ကား မဆက်စပ်ဘဲ ကြည့်လို့ရတဲ့အတွက် ခြားခြားပြီးတော့ မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ (၈) ကားလုံးတင်ပေးထားပါတယ်။ အားပေးမှုတော်တော်လေးရရှိခဲ့ပြီး IMDb Rating (7/10) ရရှိထားလို့ Comedy အမျိုးအစားဇာတ်ကားတွေထဲမှာ Rating မြင့်တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။ အနောက်တိုင်း လူငယ်တွေရဲ့ စူးစမ်းမှု နဲ့ အရွယ်ရောက်လာမှုကြောင့် ဖြစ်ပျက်တတ်တာလေးတွေကို ဟာသရောနှောပြီး အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပွင့်လင်းစွာ တင်ဆက်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိသားစုနဲ့တော့ မကြည့်သင့်ပါဘူး။
IMDB: 7.0/10 370,170 votes
X Zone (2020) Thriller ##unicode သူငယ်ချင်းအုပ်စုတစ်စု တောလယ်ထဲက အပန်းဖြေအိမ်ကြီးတစ်ခုဆီကို ပျော်ပွဲစားခရီးထွက်လာကြတယ်... လမ်းခရီးတစ်လျှောက် ပျော်ပါးကြတယ်.. ဒါပေမဲ့ သူတို့တွေတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ အကြံကိုယ်စီနဲ့.. ညဘက်ဝိုင်းဖွဲ့စားသောက်ကြရင်း ပျော်ပါးနေတုန်း မထင်မှတ်ဘဲ အဲ့ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဖြစ်ရပ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်... တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူတို့တွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် အသတ်ခံရလာတဲ့အခါမှာတော့ လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို ဇာတ်ကားထဲမှာ ဆက်လက်ရှုစားပေးပါဦးဗျ... 18+ အခန်းများပါဝင်သဖြင့် မိသားစုနဲ့ဆို အခန်းကျော်ကြည့်ပါ..တစ်ယောက်တည်းဆို အေးဆေးကြည့်ပါ... ##zawgyi Thriller သူငယ္ခ်င္းအုပ္စုတစ္စု ေတာလယ္ထဲက အပန္းေျဖအိမ္ႀကီးတစ္ခုဆီကို ေပ်ာ္ပြဲစားခရီးထြက္လာၾကတယ္... လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္ ေပ်ာ္ပါးၾကတယ္.. ဒါေပမဲ့ သူတို႔ေတြတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕စိတ္ထဲမွာေတာ့ အႀကံကိုယ္စီနဲ႔.. ညဘက္ဝိုင္းဖြဲ႕စားေသာက္ၾကရင္း ေပ်ာ္ပါးေနတုန္း မထင္မွတ္ဘဲ အဲ့ဒီအိမ္ႀကီးထဲမွာ ထူးထူးဆန္းဆန္း ျဖစ္ရပ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္... တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ သူတို႔ေတြ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ အသတ္ခံရလာတဲ့အခါမွာေတာ့ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါ့မလားဆိုတာကို ဇာတ္ကားထဲမွာ ဆက္လက္ရႈစားေပးပါဦးဗ်... 18+ အခန္းမ်ားပါဝင္သျဖင့္ မိသားစုနဲ႔ဆို အခန္းေက်ာ္ၾကည့္ပါ..တစ္ေယာက္တည္းဆို ေအးေဆးၾကည့္ပါ... Review – Mr Fancy File Size – 1GB Format…mp4 Quality :,720p WED-DL Duration… 1h 37min Genre :Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Mr Fancy Encoded by ...
JANE’S SUMMER (2020) အရင်ဆုံးပြောချင်တာက ၁၈အပေါင်းဇာတ်ကားလေးပါ အရမ်းတော်တဲ့အကပညာရှင်မိန်းကလေးတစ်ယောက် မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့ပေမယ့် ထင်သလိုဖြစ်မလာတဲ့အခါ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူရှိတဲ့ ဘန်ကောက်ကိုသွားရင်း ကောင်လေးနှစ်ယောက်နဲ့တွေ့မိရာက ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေပါ Jane’s Summer – ဂျယ်အင်းရဲ့ဆန်းမား ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းခေါင်းစဉ်လိုပဲ ဂျယ်အင်းနဲ့ဂျီဝူ ဆန်းမားနဲ့ရိန်းဖောတို့ လေးယောက်ကြားမှာ ဘယ်လိုပတ်သတ်မှုတွေရှိတယ် ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာ ၁၈+ အခန်းလေးတွေကြည့်ရင်း အဖြေရှာလိုက်ကြရအောင်
IMDB: 5.8/10 51178 votes
Dangerous Liaisons (2012) 18+ ##zawgyi Dangerous Liaisonsကားကေတာ့တ႐ုတ္ေတာ္လွန္ေရးကာလက အခ်စ္ဇာတ္ကားေလးျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့လူခ်မ္းသာXie Yifanကလူရႈပ္လူေပြတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီးသူ႔လက္ကလႊတ္တဲ့မိန္းကေလးဆိုတာမရွိသေလာက္ရႈပ္ေပြတဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ။ တစ္ေန႔သူ႔အိမ္ကိုႏွစ္ဝမ္းကြဲအမ်ိဳးDu Fenyuဆိုတဲ့အမ်ိဳးသမီးေလးတစ္ေယာက္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ Du Fenyuကမုဆိုးမတစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမဲ့တည္ၿငိမ္ေအးေဆးတဲ့အမ်ိဳးသမီးေကာင္းေလးျဖစ္တဲ့အတြက္ Xie Yifanရဲ႕ခ်ဥ္းကပ္မႈကိုျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။ Xie Yifanတစ္ေယာက္ကေတာ့ သူ႔သေဘာက်ေနတဲ့Mo Jieyuရဲ႕အခ်စ္ကိုရဖို႔ ေလာင္းကစားတစ္ခုလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့Du Fenyuသာသူ႔ကိုခ်စ္လာၿပီးသူနဲ႔အိပ္ခဲ့ရင္Mo JieyuကXie Yifanအခ်စ္ကိုလက္ခံရမွာဆိုတဲ့ေလာင္းကစားတစ္ခုဘဲ​​ျဖစ္တယ္။ Xie Yifanတစ္ေယာက္Du Fenyuရဲ႕အခ်စ္ကိုရယူႏိုင္ပါ့မလား။ Mo Jieyuကေရာဘယ္လိုအဆိပ္ျပင္းတဲ့တစ္ျခားအႀကံေတြရွိေနေသးလဲဆိုတာစိတ္ဝင္စားဖြယ္ၾကည့္ရႈရမဲ့ကားေလးျဖစ္ပါတယ္။ (၁၈ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူမ်ားသာႀကည့္ႀကပါရန္ /မိသားစုႏွင့္အတူမႀကည့္သင့္ပါ။) ##unicode Dangerous Liaisonsကားကတော့တရုတ်တော်လှန်ရေးကာလက အချစ်ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့လူချမ်းသာXie Yifanကလူရှုပ်လူပွေတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူ့လက်ကလွှတ်တဲ့မိန်းကလေးဆိုတာမရှိသလောက်ရှုပ်ပွေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ တစ်နေ့သူ့အိမ်ကိုနှစ်ဝမ်းကွဲအမျိုးDu Fenyuဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ Du Fenyuကမုဆိုးမတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့တည်ငြိမ်အေးဆေးတဲ့အမျိုးသမီးကောင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက် Xie Yifanရဲ့ချဉ်းကပ်မှုကိုငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ Xie Yifanတစ်ယောက်ကတော့ သူ့သဘောကျနေတဲ့Mo Jieyuရဲ့အချစ်ကိုရဖို့ လောင်းကစားတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့Du Fenyuသာသူ့ကိုချစ်လာပြီးသူနဲ့အိပ်ခဲ့ရင်Mo JieyuကXie Yifanအချစ်ကိုလက်ခံရမှာဆိုတဲ့လောင်းကစားတစ်ခုဘဲဖြစ်တယ်။ Xie Yifanတစ်ယောက်Du Fenyuရဲ့အချစ်ကိုရယူနိုင်ပါ့မလား။ Mo Jieyuကရောဘယ်လိုအဆိပ်ပြင်းတဲ့တစ်ခြားအကြံတွေရှိနေသေးလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ (၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးသူများသာကြည့်ကြပါရန် /မိသားစုနှင့်အတူမကြည့်သင့်ပါ။) Review – Myet Chel File Size – 1.2GB Format…mp4 Quality : 1080p WEB-DL Duration… 1h 50min Genre :Drama, Mystery, Romance Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Myet Chel Encoded by ...
IMDB: 5.9/10 1,728 votes
Dangerous Liaisons (2012) 18+
Gabriel’s Inferno Part II Gabriel’s Inferno Part II(2020) သို့မဟုတ် Gabriel’s Rapture (2020) အညွှန်း ********************************************************************* ဒီကားလေးကတော့ Gabriel’s Inferno ဆိုတဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ထွက်ထားတဲ့ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်… ကနေဒါလူမျိုး စာရေးဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ရာ ဖြစ်ပြီးတော့ ဒီ၀တ္ထုဟာဆိုရင်New York မြို့မှာ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာရင်း၀င်တဲ့အထိ နာမည်ကြီးတဲ့အတွက် ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ဆိုတာ ပြောဖို့လိုမယ်တောင် မထင်ပါဘူး… Scholarship ရထားတဲ့ကျောင်းသူလေး ဂျူလီယန် မစ်ချယ် နဲ့ ပရော်ဖက်ဆာ ဂေဘရီယယ် အန်မာဆင်န် တို့ အချစ်ဇာတ်လမ်းအဆက်ပါ…အပိုင်း(၁)မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေအဖို့ လုံးဝ Spoiler ကြီးဖြစ်မှာစိုးလို့ အညွှန်းကိုအများကြီးမရေးပါတော့ဘူး…. ဒီကားကိုမကြည့်ခင်Gabriel’s Inferno (2020)ကိုကြည့်ပါ…ပြီးမှ ယခုကားကိုဆက်ကြည့်ကြပါ…. သရုပ်ဆောင်တွေကတော့… ပရော်ဖက်ဆာ ဂေဘရီယယ် အဖြစ် နာမည်ကျော်မင်းသားကြီး Giulio Berruti နဲ့ ဂျူလီယန် အဖြစ် မင်းသမီး Melanie Zanetti တို့က အတွဲညီညီပါ၀င်ထားပါတယ်… ဝုန်းဒိုင်းကျဲနေတဲ့ဇာတ်ကားတွေကြည့်တာ ခဏရပ်ပြီး Romance စစ်စစ်ကိုခံစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကားလေးကို 100% recommend ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ…